शीर्ष Dest गन्तव्यहरू एक्लो यात्रा गर्न यो गिरावट यात्रा समाचार
यस गिरावटमा एक्लै यात्रा गर्नको लागि best उत्तम स्थानहरू
मरियम | | Getaways यूरोप, के हेर्ने
यो सत्य हो कि साथीहरू वा परिवारको कम्पनीमा यात्रा गर्नु भनेको रमाइलो अनुभव हो र किस्सा पूर्ण छ। जहाँसम्म, एक्लै यात्रा गर्नु भनेको एक अनौंठो छुटकारा हुन सक्छ, शान्ति, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता र हामी जे पनि गर्न को लागी सबै गर्न को लागी स्वतन्त्रता को पूर्ण।
जब यो पहिलो पटक गर्दैछ, यो पनि सम्भावना छ कि हामीसँग पनि क्वालिफ छ तर तुरुन्तै यो पृष्ठभूमिमा जान्छ जुन भ्रमले धकेल्छ जुन हामीलाई थाहा छ कि एउटा विमानमा जान्छ कि हामीसंग हाम्रो अगाडि एउटा साहसिक कार्य छ, जसले एकपटक फिर्ता लेराउँदछ। अविस्मरणीय सम्झनाहरु।
त्यहाँ शरद beginsतु सम्म केही दिन बाँकी छ र छुट्टी पोस्ट सिन्ड्रोमसँग लड्नको लागि उत्तम तरिका भनेको युरोपको माध्यमबाट एक्स्प्रेस यात्राको योजना बनाएर हो। यस गिरावटमा एक्लै यात्रा गर्नको लागि best उत्तम गन्तव्यहरू के हुन्?
२०१ 2017 मा पर्यटक संस्था यूरोपीय सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य द्वारा उत्तम यूरोपीय गन्तव्य रोजिएको, पोर्टो नजिकैको गन्तव्य हो जसले हाम्रो पलायनलाई कुनै स्मरणीयमा परिणत गर्ने वाचा गर्दछ। थप रूपमा, यसले स्पेनको छेउमा रहँदा अतिरिक्त शान्तिको प्रस्ताव गर्दछ यदि यो तपाईं पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्नुहुन्छ र तपाईं घरबारविहीन महसुस गर्नुहुन्छ भने।
तर कसरी तपाईं पोर्टो यस गिरावट रूपमा अद्भुत शहर को मजा लिन सक्नुहुन्न? तपाईंले नदीमा जाने सडकहरू हुँदै हिंड्दा समय बग्नेछ। हामी सबैको पोर्टोको छवि यसको नदी किनारको हो, विशिष्ट डु boats्गा र ती चित्रमय पुराना घरहरूको साथ। निस्सन्देह एक शानदार पोर्ट वाइन र यस पोर्चुगिज शहरको केही विशिष्ट पकवानहरूको स्वाद लिन शहरको सब भन्दा पुरानो क्षेत्रहरू मध्ये एक हो।
अर्को चीज जुन पोर्टोको प्रेममा पर्दछ त्यो यो पुरानो शहर हो जुन १ 1996 XNUMX in मा युनेस्कोले विश्व विरासत स्थल घोषित गर्‍यो। केन्द्रको माध्यमबाट पैदल यात्राले हामीलाई पलासियो डे ला बोलसा, क्याथेड्रल वा प्रसिद्ध सैन बेन्टो ट्रेन स्टेशन पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।
यो नर्वेको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो Oslofjord fjord र जंगलको पहाडको भीडको बीचमा अवस्थित छ, केही दिन आराम गर्न यसलाई उत्तम ठाउँ बनाउँदछ। जे होस्, यसले विविध प्रकारको नाईट लाइफ पनि प्रदान गर्दछ त्यसैले हामी भन्न सक्दछौं कि ओस्लो ती यात्रुहरूको लागि एकदमै रोचक विकल्प हो जसले आराम र रमाईलोको मिश्रण चाहान्छन्।
तपाईको बसाईको अवधिमा तपाईले ग्रिनेरलोक्का क्षेत्रको वैकल्पिक अंश पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, डु take्गा लिनुहोस् र ओस्लोफजर्डको भ्रमण गर्नुहोस्, फ्रोगनर पार्कमा जानुहोस् यसको मूर्तिकलाहरूको प्रशंसा गर्न र फ्रम म्यूजियममा पोलर अभियानहरूको बारेमा जान्न पनि।
शहरको केन्द्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि तपाईं शहरको बाइक वा हिंड्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि ओस्लो पासले तपाईंलाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क पहुँच दिनेछ र अन्य चीजहरूका साथै विभिन्न संग्रहालयहरूमा पनि प्रवेश प्रदान गर्दछ।
यति धेरै गतिविधिहरु तपाइँको भूख, ठीक छ? ओस्लोमा तपाईंले धेरै आकर्षक रेस्टुरेन्टहरू र बारहरू भेट्टाउनुहुनेछ जहाँ तपाईं विश्वभरि नै विभिन्न स्वादहरूका स्वाद लिन सक्नुहुनेछ।
चेक गणराज्यको राजधानी सबै यात्रुहरूका लागि मीठो व्यवहार हो। यससँग व्यावहारिक रूपमा सबै चीजहरू छन्: यो सुन्दर छ, यो शुद्ध छ र यो सस्तो छ। वास्तवमा, यो यति सुन्दर छ कि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं परिकथा सपना देख्दै हुनुहुन्छ। यस शहरको इतिहास प्रतीकात्मक भवनहरू र यसको कुनाहरूमा छरिएका स्मारकहरूको विशाल विविधतामा प्रतिबिम्बित छ।
एकचोटि तपाईले आफ्नो स्नायुमा एकै गन्तव्यमा पुग्नको लागि जानुभयो भने, तपाई प्रागको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ। कुन गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ? प्रसिद्ध चार्ल्स ब्रिज पार गर्ने जस्तो क्लासिकबाट अद्भुत आश्चर्यजनक क्याफेहरू र अनुपम बगैंचामा हराउनु। प्रागको अर्को महान प्रतीक ह्राडकन क्यासल र सेन्ट भिट्स क्याथेड्रलको स्मारक परिसर पनि भ्रमण गर्नुहोस्।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्राग लगभग एक हजार बर्षको लागि वास्तुकलाको विकासमा एक सही खुला संग्रहालय हो: रोमानेस्क, गोथिक, रेनेसास, बारोक, 'आर्ट नोव्यू' र क्युबिज्म ... कला प्रेमीहरूले आफूलाई बौने जस्तै रमाउनेछन्।
भियना खुल्ला हतियारले तपाईंलाई स्वागत गर्दछ। अस्ट्रियाको राजधानी शाही परम्परा र आधुनिक रचनात्मकताको सफल मिश्रण हो। यससँग सबै स्वादका लागि गतिविधिहरू र मुख्य पर्यटक आकर्षणहरूमा तपाईं यसको सफा र सुन्दर सडकहरूमा सुखद पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
भियना दर्शनीय भवनहरूले भरिएको छ जुन कथाबाट बाहिर आउन सक्दछ र साथै विश्वमा सब भन्दा सुन्दर कफि पसलहरू पनि छन्। तिनीहरू सस्तो छैनन् तर एक ब्रेक लिन र यी स्थानहरू मध्ये कुनै एकमा स्वादिष्ट कफीको मजा लिनु सधैं राम्रो हुन्छ अनौंठो मेमोरी हुनेछ।
भियना मा तपाईको बस्थे को लागी धेरै गतिविधिहरु छन्। तपाईं यात्रा र साइटहरू तपाईं आफैं भ्रमण गर्न व्यवस्थित गर्न चाहानुहुन्छ तर हामी तपाईंलाई डेन्यूबमा क्रूज प्रस्ताव दिन चाहन्छौं, शाही दरबारहरू भ्रमण गर्न, सेन्ट स्टीफनको क्याथेड्रलको धरहरामा चढ्न,eयूरोका लागि ओपेरामा जान, ललित कलाको संग्रहालय, संसद वा सिटी हलको भ्रमण गर्नुहोस् र रिंगस्ट्र्यामा ट्राम सवारी गर्नुहोस्, अन्य धेरैमा।
शरद forतु र एकल यात्रा गर्न चाहनेहरूको लागि आवश्यक गन्तव्य। सधैं मनमोहक ब्रिटिश राजधानी भ्रमण गर्मी पछि गर्न एक ठूलो योजना हो।
लन्डनमा त्यहाँ केहि गर्न को लागी केहि चाखलाग्दो छ किनकि यसले प्रदान गर्ने धेरै सम्भावनाहरूको कारण। कला, इतिहास, खेल, शपिंग, कन्सर्ट र चाडपर्व, फेसन ... साथै, तपाईं विश्व धरोहर साइटहरू घोषित धेरै ठाउँहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, विश्वका केही उत्कृष्ट संग्रहालयहरू नि: शुल्क रमाइलो गर्नुहोस् र यसको आठवटा पार्कमध्ये कुनैमा विश्राम लिनुहोस्। प्रकृति रमाईलो गर्दै। तयार हुनुहोस् किनकि शहरका सडकहरूमा सँधै आश्चर्यका घटनाहरू हुन्छन्।
Https://www.visitbritain.com/es/es/england/londres#ytcVP3wiVled5xhk.99 मा थप पढ्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » यस गिरावटमा एक्लै यात्रा गर्नको लागि best उत्तम स्थानहरू